ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: October 2008
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:28 AM No comments: Links to this post
1st Goal By Lampard
3rd Goal By Malouda
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:29 PM No comments: Links to this post
ကဲ ဒီအပတ်တော့ ပေါက်ကွဲလိုက်ကြတာပေ့ါဗျာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဖင်ပိတ်ကန်တက်တဲ့ အသင်းကို ရှုံးခဲ့ရတော့ ဒီတခါတော့ ဟူးလ်စီးတီး ပိတ်ကန်ရင်လည်း စကိုလာရီ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တခုရှိတာက အသင်းကြီးတွေ ပိတ်ကန်ရင် ကြောက်ရပေမယ့် အသင်းငယ်တွေကတော့ ကြောက်စရာတော့ မရှိပါဘူး။ တချိန်ချိန်တော့ အမှားလုပ်ကြမှာ မဟုတ်လား။ အဲဒီအချိန် ကိုလမ်းပတ် ကစ်နဲ့မိရင်တော့ ဟဲဟဲဟဲ။ လာထားပဲ။ ဟိုတခါတုန်းက ဟူးလ်စီးတီးကို နိင်ခဲ့တာလေး ကြ့ည်လိုက်ပါဦးဗျာ။ အခုတခါတော့ ၂းဝ လို့ပဲ ယူလိုက်တော့မယ်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:13 PM No comments: Links to this post
Ohn !!!! Terry has been named in the FIFPro World XI for the fourth consecutive season - the only player to have achieved this accolade.
The central defender was recognised for his consistent form during the 2007/08 season, despiteastring of injuries, meaning it is four straight years since the title-winning 2004/05 campaign that he has received this award. AC Milan's Kaka has been in the last three, while Ronaldinho was in the first three. Only Terry is an ever-present, with the FIFPro awards commencing in 2005.
Hewas voted into the side by some 45,000 professional players from all over the world, and was one of 10 current Chelsea players in the original shortlist of 55, now whittled down to the final 11.
The Chelsea captain was one of five from the Premier League to be named in the side.
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:10 PM No comments: Links to this post
အနယ်လ်ကာအား အစားထိုးရန် တိုက်စစ်မှုးတစ်ဦး
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:26 PM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:59 PM No comments: Links to this post
တကယ်တော့ ဒီပွဲဟာ လီဗာပူးလ်ရဲ့ အသင်းကြီး တသင်းရဲ့ အဆင့်အနေနဲ့တောင် မတန်ဘဲ သရေအများဆုံး မျှော်လင့်ထားတဲ့ ပွဲတပွဲပဲ ဖြစ်သင့်ခဲ့တာပါ။ ချဲလ်ဆီးရဲ့တိုက်စစ်ကို ခုံခံရင်း အခြေအနေ ပေးပါက တန်ပြန်တိုက်စစ် ၊ ဒါမှ မဟုတ် ကော်နာ ခေါင်းတိုက်ဘော ၊ ပြစ်ဒဏ်ဘော တို့က တဆင့် ဂိုးရနိင်ဖို့ပဲ မျှော်လင့်ထားခဲ့မယ်လို ထင်မိပါတယ်။
အခြေအနေက ဒီလိုတော့ ရှိခဲ့တယ်
အသင်းကြီး တသင်းမပြီသစွာ တန်ပြန်တိုက်စစ် မဆင်နိင်ပဲ တချိန်လုံး နောက်တန်း ၈ ယောက် ရှေ့တန်း ၂ ယောက် ဂိုးသမား ၁ ယောက်နဲ့ ကန်သွားပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးကပဲ ကံဆိုးတာလား ၊ လီးဗာရူးကပဲ ကံကောင်းတာလား မသိတော့ပါဘူး။ ပွဲစပြီး သိပ်မကြာခင် အလွန်ဆိုး ဆိုတဲ့ကောင်၇ဲ့ ကြက်ကစ်လို့တောင် မခေါ်ထိုက်တဲ့ ပျော့ဖတ်ဖတ် ကန်ချက်ဟာ လူထိပြီး လမ်းကြောင်းလွဲကာ ဂိုးထဲကို ၀င်သွားခဲ့ရပါတယ်။
သရေကျမယ်လို့ အများဆုံးမျှော်လင့်ထားရာကနေ အနိင်ရလိုက်တော့ ပိတ်လိုက်တဲ့နောက်တန်း ၊ ချလိုက်တဲ့ လူ ။ ဒီကြားထဲ ချဲလ်ဆီးကန်သမျှဟာ လူထိ ၊ ဘေးထွက်နဲ့ ပဲ ချဲလ်ဆီးတို့ ၈၆ ပွဲမရှိ မရှုံးခဲ့တဲ့ စံချိန်ကို လီဗာရူးတို့ အဆုံးသတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ စံချိန်ချိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်တန့်စေခဲ့တာပါ။ စံချိန်ချိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၈၆ ပွဲအထက် အရှုံးမခံဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
နောက်တပတ်တော့ ခြေစွာနေတဲ့ ဟူးလ်စီးတီး ဆိုတဲ့အသင်းကို မကြေနပ်ချက်တွေ ပုံချကြတာပေ့ါဗျာ။ တောက်.... သူတပြန် ကိုယ်တပြန်မဟုတ်ဘဲ တဖက်သတ် ကန်ပြီး ရှုံးရတာကို အနာဆုံးပဲ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:38 AM 1 comment: Links to this post
မနက်ဖြန် အတွက်ပွဲကို စိတ်လှုပ်ရှားပြီလား ချဲလ်ဆီးဖန်တို့ရေ။ ဒီနှစ်မှာ နောက်ကျကံကောင်းဂိုးတွေနဲ့ အနိင်ယူနေတက်တဲ့ ကြိုးကြာတွေကို အိမ်ကွင်းမှာ ချဲလ်ဆီးတို့ ရင်မဆိုင်နိင်ဘူးလို့များ စိုးစဉ်းမျှ စိတ်ထဲ မရှိလိုက်ပါနဲ့။ တောရက်စ်မပါတဲ့ တိုက်စစ်နဲ့ အလယ်တန်းချင်း ယှဉ်ရင် ချဲလ်ဆီးတို့ အပြက်အသက်ကို ယှဉ်နိင်ပါတယ်။ ကာရေဂါ ၊ အက်ဂါ အတွဲဟာ တယ်ရီ ၊ ကာဗယ်လ်ဟို ခံစစ်နဲ့ယှဉ်လို့မရသလို တိုက်စစ်အားသန်တဲ့ လမ်းပတ်နဲ့ အဖျက်အားကောင်းတဲ့ ဂျရတ်ယှဉ်ရင်တောင် အလယ်မှာ ဒေကိုက ကျန်နေပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ အိမ်ကွင်းပါ။ ၄ နှစ်ကျော်ကြာ ထိန်းခဲ့တဲ့ အိမ်ကွင်းစံချိန်ကို ဘယ်သူမှလည်း မချိုးနိင်သလို ၊ နောက်ထပ်လည်း ဘယ်အသင်းမှ လုပ်ဆောင်နိင်မယ်လို့ မမျှော်လင့်မိပါဘူး။
ကြိုးကြာတွေနဲ့တွေ့ရင် ဂိုးသွင်းနေကြ ဒရော့ဘာကြီး ဒဏ်ရာက သက်သာလာတာကြောင့် ပြန်ပါလာနိင်ပါတယ်။ မန်ယူသရေကျခဲ့တာကြောင့် ချဲလ်ဆီးတို့ လီဗာပူးလ်ကို အနိင်ရအောင် ဆော့မှာပါ။ စကိုလာရီဟာ သူဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဘောင်ဆင်ဝါ ရဲ့ အတက်ကင်ပိုင်းဟာ တော်တော်လေးကို တဘက်နောက်တန်းအတွက် ဒုက္ခပေးနေပါတယ်။
လီဗာပူးလ်နောက်တန်းက ဂိုးပေးရတာ များနေသလို ၊ တောရက်စ်ပါတဲ့ ရှေ့တန်းဟာလည်း တော်တော် ဂိုးရခဲ့ပါတယ်။ မနက်ဖြန်အတွက် ကိုလမ်းပတ်ကို အများကြီး မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိ အကောင်းဆုံး ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ကွင်းလယ်လူတစ်ယောက်ပါ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:41 AM No comments: Links to this post
Ahead of the Liverpool game, Felipe Scolari has spoken aboutaplayer he hopes to welcome into his squad during the January transfer window - but it isn'tanew signing.
'Michael Essien!' the Chelsea manager declared.
'I think Essien will come to play with us one month before the doctors said he would. I see him every day work hard and if God helps me, I think Essien is with us in the last days in January.
'He is the man I want in January Peter Kenyon to buy,' Scolari joked, the topic of transfer window signings on the agenda after the Chelsea chief executive's comments in the last 24 hours.
'It's our intention to put our squad together at the start of the season,' Kenyon said.
'I don't see us being active in the January window. I don't think there isaneed, unless that changes through events like injuries.'
To those sentiments, Scolari added:
'There arealot of games to play. I am happy with this squad and we don't know what is going to happen before January. It is normal for Peter to say no because it is impossible to buyaplayer now.
'I think money is notaproblem. We discuss this at the correct time, now is not the correct time. I haveabig game this weekend. I need to be thinking about Liverpool players, not transfer players.'
Scolari will also be thinking about his own players over the weekend, and an injury count that gave hima24-man squad for Friday training. That party may increase by Sunday.
'Ashley Cole began training today,' he reported, the player on his way back fromahamstring tear. On Drogba, recovering from the ankle and knee damage he suffered at the beginning of the month, Scolari said:
'He needsaminimum of one week or 10 days more.
'Mineiro arrived here today,' he added on the Brazilian midfielder signed to help cover for the Essien absence.
'He arrived in very good condition from 10 days work in Sao Paulo in the club where he was player before. The fitness coach is good friend for us. He is maybe [available] for next weekend.'
Liverpool have reported that Fernando Torres will definitely miss Sunday's game withahamstring injury. His fellow striker Robbie Keane isadoubt but Steven Gerrrard and Xabi Alonso, withdrawn during the midweek Champions League game, are fit to play.
Scolari believes it is good players and good organisation that makes Liverpool dangerous opponents on Sunday, not their recent record for comebacks, althought that isacharacteristic he admires.
'It should beavery good game against Liverpool because the two clubs, they have the same the spirit. They fight until the last minutes to win games. Liverpool has done this more than us but the spirit is the same.
'I think the best team [Rafael] Benitez has had is the one this season and if I say Liverpool isavery good team, I know Benitez will say the same about us.'
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:34 AM No comments: Links to this post
Zshare Part -1
Zshare Part - 2
Rapidshare Part - 1
Rapidshare Part - 2
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:53 AM No comments: Links to this post
ကိုလမ်းပတ်လည်း စောဒက တက်လို့မရဘူး
တောကြက်ကန်တာကို ကယ်ခဲ့တဲ့ အလုံး
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:05 PM No comments: Links to this post
Goal By Terry
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:17 PM No comments: Links to this post
ကဲ ဖန်တွေရေ မနက်ဖြန်တော့ တပ်လှန်ပြီးတော့ ကန်ကြမယ်။ ၀ုန်းဒိုင်းပဲ။ ကိုလမ်းပတ် ခြေစွမ်းပြနိင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိတယ်။ ရိုးမာက မန်ယူတောင် မနိင်တာ။ ချဲလ်ဆီးဆို ဝေးရော မဟုတ်လား။ ဟဟ။ ဖြစ်နိင်ဖွယ်ရာ လိုင်းအပ်လေးက ဒီလိုပါတဲ့။
ပီတာဆက်ခ်ျ ပြန်ပါလာနိင်သလို ဒေကိုကတော့ ကန်နေနိင်ပါပြီ။ စကာမဆပ် ဒရော့ဘာ ပြန်လာတော့မယ်ဆိုပဲ။ ဟဲဟဲဟဲ။ ဒါဆိုရင်တော့ သဘောပေါက်တယ်နော်။ သဘောပေါက်ပါတယ်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:52 AM No comments: Links to this post
Three Chelsea players have been nominated for the Ballon D'Or award, seen as the most prestigious individual accolade in European football.
Michael Ballack, Didier Drogba and Frank Lampard are all on the shortlist of 30 players from around the continent's top clubs. Drogba was fourth in last season's awards, finishing behind Lionel Messi, Cristiano Ronaldo and winner Kaka, all of whom are nominated again for 2008.
No player has ever won the award asaChelsea player, but our players do haveastrong history.
Former Blues Andriy Shevchenko (2004), George Weah (1995) and Ruud Gullit (1987) were all winners while with AC Milan, while Lampard finished second in 2005.
The award was initiated in 1956 when Stanley Matthews was the first winner, but Michael Owen remains the only player at an English club to scoop the prize since the 1970s.
Nominations are based on votes by journalists working on football titles throughout Europe, and are compiled by the France Football magazine. The winner will be announced on December 2.
The full list of nominations for 2008 is as follows:
Andreï Archavine (Zénit St Petersburg)
Youri Zhirkov (CSKA Moscow).
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:53 PM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:53 PM No comments: Links to this post
ဘယ်သူမဆို ဒီပွဲဟာ ၁းဝ ၊ အမြင့်ဆုံး ၂းဝ လောက်နဲ့ ပြီးမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားနိင်ကြပါတယ်။ နိင်ငံတကာ ပွဲကစားထားပြီး ခြေကုန်လက်ပန်း ကျနေချိန်မှာ ၊ လူတွေက နာနဲ့ အတော့်ကို ရုန်းကန်ရမယ့် ပွဲတပွဲဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမယ့် တက်တက်စင်အောင် လွဲခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ဆော့သွားတဲ့ ဘိုရိုဟာ တော်တော်လေးကို ခြေပျက်နေတာရယ် ချဲလ်ဆီးတွေ အလုံးတိုင်းကို အကျိုးရှိရှိ မဖြုန်းဘဲ ကန်နိင်ခဲ့ကြလို့ အခုလို ဂိုးပြက်သွားခဲ့ရတာပါ။ စကိုလာရီကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။ နည်းပြနဲ့ ချဲလ်ဆီးပလေယာတွေဟာ လူတွေနာ ၊ ပွဲတွေ ပန်းနေချိန်မှာ သူတို့ဘာလုပ်နိင်တယ်ဆိုတာကို အကောင်းဆုံး သက်သေပြသွားနိင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကဲ ဒီနေ့အတွက် ဂိုးလေးတွေကတော့
3 rd goal by Kaloy
4th goal by Lampard
5th goal by Malouda
HQ - FullMatch
Man Of The Match - Belleti
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:45 AM No comments: Links to this post
ဒီတပတ် ဘိုရိုးချဲလ်ဆီးပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီးကြီး လူတွေ တော်တော်များများ နာနေတာ စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကွင်းကလည်း အဝေးကွင်း ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ အိမ်ကွင်းမှာတဲ့ ဘိုရိုကို ခက်ခဲစွာ ကစားရဦးမှာပါ။ ဖြစ်နိင်မယ် ထင်တဲ့ လိုင်းအပ်လေးကတော့
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:06 AM No comments: Links to this post